Dowladda Somalia ayaa Golaha Ammaanka u dirtay warqad jawaab u ah hadal golaha ay ka sheegtay… – Hagaag.com
Dowladda Somalia ayaa Golaha Ammaanka u dirtay warqad jawaab u ah hadal golaha ay ka sheegtay…
Posted on 10 Abriil 2021 by Admin in National // 0 Comments
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa warqad u dirtay Madaxweynaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee xilka ka degaysa Linda Thomas-Greenfield taas oo jawaab u ah hadal ay March 31 ay Golaha ka sheegtay.
Warqadda waxaa lagu xusay in Soomaaliya ay wajahayso caqabado doorasho, balse lagu rajo weyn yahay in laga gudbo ayadoo loo marayo wada hadal.
Warqadda waxaa lagu xusay in xasilooni siyaasadeed ay muhiim tahay, sidoo kale in doorasho loo dhan yahay iyo tanaasulna lagama maarmaan yihiin.
Dowladdu waxay warqadda ku xustay saddex qodob :
1- Doorashadu in ay tahay arrin Soomaaliyeed, oo Soomaali dhex taalla, Golaha Ammaankuna uu taageero madax-bannaanida Soomaaliya, wadajirkeeda, iyo in shuruucda caalamiga ah ee qaba in aan la soo fara gelin oo la ixtiraamo.
2- Dowladdu in heshiiskii 17 September iyo Heshiiskii Baydhabo ay u aragto asaaska doorashada, ayna ogoshahay shuruud la’aan.
3- Cabashada ammaanka doorashada si loo xalliyo, dowladdu waxay xaqiijinaysaa in Guddiga Amniga Doorashada Qaranka uu hoggaankeeda qaban doonno Ra’iisul Wasaaraha, kaas oo la wareegi doona xalka arrimaha amniga.